Indlela Become A High-Flying Izikhangibavakashi Influencer | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Indlela Become A High-Flying Izikhangibavakashi Influencer
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/12/2020)
Kuyinto iphupho - uya eholidini futhi ukhokhelwe ngoba. Akukona nje kuphela ukuthi, kodwa kufanele izindiza zakho, yokuhlala, nokudla ikhokhwe Nawe.
Impossible, kwesokudla? Ayikho indlela ubani emhlabeni bekungeke ukhokhe akekho emuva-ukunwaya sengathi ukuzwa jet ukubeka nezigigaba eziningi i A-uhlu yangakini nasembulungeni yonke-Ukuhamba Amazwe Ngamazwe superstar.
Ngaphandle ... KUKHONA!
Lokho kwesokudla, kungenzeka kuwe sihambe emhlabeni ku Dime yomunye - kodwa uya babe ukusebenzisa internet ne acuity Emvula Man ukudonsa off.
Kakhulu travel Blogger baye ezinkambeni zabo ezikhokhelwayo ngabo sibonga ingxube ithalente, inhlanhla, nangekhono - lapha yindlela ungenza okufanayo.
Noma ngabe vlogger travel, i-blogger, noma i-Twitter, lutho beats zishintshe ngempumelelo yebizo. Yingakho kubalulekile travel abagqugquzeli ukufunda ukuthi kuyivelakancane kakhulu amakhono, lokubhala.
Thatha angahlaba njalo ukubhala ikhophi omuhle ngokuthatha kwehora usuku ngalunye ukuze scribble imicabango yakho. Encwadini yezenzakalo zosuku nosuku, ukubhala blog siqu, ukuthumela ku-Twitter prolifically - nalezi amakhono ephaketheni lakho emuva, uzokwazi ukuba uziveze kahle kakhulu futhi ephelele a sezwi ukuthi ayengathola ngayo kuwe elandelayo ethandwa kuwebhu.
Thola umfutho ku abalandeli bakho
Ubani uyahamba ukuthembela zokuxhumana - Instagram umsebenzisi umlandeli ogama kuphela umama wabo kanye bot ezivela eRussia, noma othile nabalandeli ezingaphezu kuka Kim Kardashian?
Impendulo ka-sobala, futhi kungani kufanele bachithe imali nokutshala izimali ezinhlelweni abalandeli njengoba uqale uhambo lwakho ukuba abe influencer.
Ukuthenga abalandeli kusuka kumasayithi afana Greedier Social Media kuyindlela ekahle ezicela a lolusisekelo ubuqotho ukuthi ungakwazi ke wakhela esikhathini esizayo.
Bremen ukuze Berlin Izitimela
Xhumana nabantu abalungile
Imboni travel ibhulogi ezincintisanayo, futhi abantu abaningi banikela ngayo go njalo ngonyaka. Uma une kwegciwane okuqinile abalandeli kanye nokuqukethwe, indlela kuphela ukuze wena waphawula ukuthi ithintane travel abahlinzeki owayenganikela axhase wena ukuya eholidini.
Ukuze wenze idili ezuzisayo, uzoba ukwenza kucace ukuthi uxhasa wena uyobe uhlinzeke laba bantu nge ukuchayeka eyigugu nokhiye ku lokubala ubuningi babantu babo. Lena pro ESIKHONA ilungiselelo quid, kodwa lowo kuzokuvumela ubone izwe.
Lyon eBordeaux Izitimela
Ziqonde izilaleli zakho
abaxhasi yakho entsha ngeke unamathele azungeze isikhathi eside uma ungacabangi ungakwazi uzibandakanye nezethameli zakho - yingakho odinga ukukwazi ukuthi ngubani wakho lokubala ubuningi babantu kuyinto.
Lokho kusho ukuthi uthole lonke ulwazi isilinganiso abangontanga izithameli zakho, abazithandayo, futhi ukungathandwa, lokho izingosi abazibheka njalo vakashela, futhi yini ukuthi benzani lapho ungekho kuwebhu. Sinalokhu kwaziswa onawo, uzokwazi ukudala okuqukethwe abalandeli bakho abathanda - bese ugcine abaxhasi yakho ohlangothini.
Yilezo amathiphu ethu! Ungacabanga yimuphi omunye izindlela abe ephezulu ezindizayo travel influencer? Khona-ke sicela usazise esikhaleni sokuphawula ngezansi!
Isikhumulo sezindiza iLyon kuya eGeneva Izitimela
Nokho ngaphambi kokuba ngibe influencer, udinga ukuqeqesha ukuhamba uye endaweni exotic, bese uqala ukuthatha izithombe ezesabekayo esimweni esihle, kukhona ufunda? Sebenzisa Londoloza Isitimela ukuze uthole amathikithi esitimela eshibhe, ngakho-ke ngeke ukhokhe kakhulu ukuba abe umsebenzi zokuphila kwakho!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “5 Kuhle Iziphuzo Local ukuze Zama eYurophu” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-become-a-high-flying-travel-influencer%2F ‎– (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha tr ukuze ru noma kanye ngezilimi ezingaphezu.
#highflyer #influencer #isihambi #travelinfluencer
6 Amathiphu engongi Lapho zemininingwane Okuhambayo EYurophu